शेयर बजार दोहोरो अंकले बढ्यो - मूल्याङ्कन अनलाइन
भदौ २९, काठमाडौँ । लगातार ओरालो लाग्दै आएको शेयर बजार आज दोहोरो अंकले उकालो लागेको छ ।
धितोपत्र बजारमा लगानी गर्नेहरु मनोवैज्ञानिकरुपमा लगानी गर्न हच्किएपछि बजार लगातार ओरालो लाग्दै आएको थियो । नेपाल स्टक एक्स्चेन्जकाअनुसार बजार ३७.११ अंकले बढेर १ हजार ५३० बिन्दुमा पुगेको छ । यस्तै ठूला कम्पनीको शेयर मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्ससमेत ७.४१ बिन्दुले बढेको छ ।
कूल १६१ कम्पनीको ११ लाख ७० हजार ७२ कित्ता शेयर रु. ६३ करोड ५० लाख ५ हजार ३५३ बराबरमा खरिद बिक्री भएको छ । नेप्से परिसूचक कोर्ष करेक्सनमा लागेको र आज बजार वृद्धि भएको बताइन्छ । धेरै कम्पनीले बोनस तथा नगद लाभांश वितरण गरिरहँदासमेत बजार ओरालो लागेपछि धितोपत्र बजारमा निराशा छाएको थियो । नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमले भने लगानीकर्तालाई संयम हुन र नआत्तिन आग्रह गरेको थियो ।
« डेढ घण्टाको बाटो अब ३० मिनेटमै पुगिने ! (Previous News)
(Next News) कृषि शिक्षाप्रति आकर्षण बढ्दै »